६ अंकले बढेपछि नेप्से १३ सयमाथि – Nepali Digital Newspaper
शेयर बजारमा सोमबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ६.३० बिन्दुले बढेर एक हजार ३०१.३४ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.२१ बिन्दुले बढेर २७८.२४ कायम भएको छ ।
कुल १६९ कम्पनीको २३ लाख ९२ हजार ४०३ कित्ता शेयर रु. ७८ करोड ६४ लाख १२ हजार ८०८ खरिद–बिक्री भए । स्टकका अनुसार कारोबार भएका १२ उपसमूहमध्ये सोमबार पाँच उपसमूहको शेयर घटेको छ भने सात उपसमूहको शेयर बढेको छ । बैंकिङ ०.८२, होटेल २०.६४, विकास बैंक ११.९४, जलविद्युत् ३५.४६, उत्पादन ५९.८१, अन्य १४.७३ र सामूहिक लगानी कोष ०.१ अंकले बढेको छ । यस्तै व्यापार ५.४९, वित्त ०.४३, निर्जीवन बिमा २५.६५, लघुवित्त १.४६ र जीवन बिमा १३.०६ बिन्दुले घटेको छ ।
कारोबारका आधारमा सोमबार शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको प्रतिकित्ता रु. ४९७ मूल्यमा रु. ११ करोड ४६ लाख एक हजार ६४५ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै प्राइम बैंकको प्रतिकित्ता रु. ३७२ मा रु. ६ करोड २४ लाख ३० हजार ८७०, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु. तीन करोड ७८ लाख ४४ हजार ४५, नेपाल बैंक लिमिटेड रु. तीन करोड ७५ लाख ८१७, सिभिल बैंक रु. दुई करोड ९२ लाख ७९ हजार ४९७ मूल्यमा कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
लगातार उकालो लाग्दै आएको शिवम् सिमेन्टको शेयर सोबमार पनि रु. ४५ ले वृद्धि भई प्रतिकित्ता रु. ४९७ मा पुगेको छ । सो कम्पनीको शेयरधनीले ९.९६ प्रतिशत कमाए । यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९.५९, किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था ७.७९, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ७.६९, कन्काई लघुवित्त वित्तीय संस्था ७.३२, भागर्व विकास बैंकका शेयरधनीले ६.९८ प्रतिशतले कमाए ।